Maxaa la gudboon korinta ubadka xasaasiga ah | Bezzia
Maxay noqon lahayd korinta ilmo dareen-xumo leh
Maria Jose Roldan | 07/01/2022 22:40 | Carruurta wax baro
Dareenku waa shay ku dhex jira qofka bini aadamka ah. Si kastaba ha ahaatee, waxa dhici karta in ay jiraan dad ay dareenkan oo kale aad uga calaamadsan yihiin kuwa kale. Dhanka carruurta, dareenka kacsanaanta ee aan soo sheegnay ayaa caqabad dhab ah ku ah waalidiin badan.
Maqaalka soo socda waxaan ku tusineynaa waxa waalidku sameeyo haddii ay arkaan in carruurtoodu ay leeyihiin dareen dareen aad uga sarreeya marka loo eego carruurta inteeda kale.
1 Waxyaabaha ay tahay in waalidka dhalay carruurta aadka u xasaasiga ah ay maskaxda ku hayaan
2 Sidee lagu ogaan karaa haddii ilmuhu xasaasiyad ka qabo
3 Sida loo korin karo ilmo xasaasi ah
Waxyaabaha ay tahay in waalidka dhalay carruurta aadka u xasaasiga ah ay maskaxda ku hayaan
Ilmaha xasaasiga ah wuxuu muujin doonaa fiiro gaar ah dhammaan faahfaahinta iyo waxyaabaha yaryar ee ku hareeraysan deegaankiisa. Markay taasi soo food saarto, waalidiintu waa inay ka fikiraan korinta ilmahooda iyada oo gebi ahaanba ka duwan tan carruurta inteeda kale.
Haddii ay dhacdo carruurta dareen-xumo, maaraynta shucuurta waa lama huraan aadna muhiim u ah. Maareyntani waxay u oggolaanaysaa ilmaha su'aasha ah inuu iska ilaaliyo inuu la kulmo xanuunnada qaarkood sida niyad-jabka.
Sidee lagu ogaan karaa haddii ilmuhu xasaasiyad ka qabo
Waxa jira dhawr arrimood oo tilmaamaya in ilmuhu aad uga xasaasisan yahay kan caadiga ah:
Waxay ku saabsan tahay carruurta aad uga fogaaday oo xishood badan.
Waxay horumariyaan heerka dareenka ka sarreeya caadiga.
Waxay ku haystaan ​​waqti adag oo leh kicin xoog leh sida ur ama sawaxan.
Caadi ahaan way ciyaaraan Keli ahaan.
Waxay leeyihiin heer shucuur sare leh dhan walba.
Waxay ku saabsan tahay carruurta hal abuur leh.
Bandhigyo taageero badan iyo deeqsinimo caruur kale.
Sida loo korin karo ilmo xasaasi ah
Korinta ubad aad u xasaasisan waa in ay ka sarreyso wax walba isagoo baraya inuu maareeyo shucuurtiisa oo dhan. Taas awgeed, waalidiintu waa inay raacaan tilmaamo ama talo taxane ah:
Waa lama huraan in ilmaha yar uu dareemo in waalidkiis ay taageerayaan. Waalidnimada ama waxbarashadu aad bay u fududahay ilaa inta u ilmuhu uu leeyahay kalsooni weyn iyo isku kalsoonaansho.
Jacaylka iyo kalgacalka dhanka waalidka waa inuu ahaado mid joogto ah. Laga soo bilaabo dhunkasho ilaa laabasho, Wax kastaa way socdaan ilaa inta ka yar uu dareemayo in la jecel yahay.
Dareenka iyo dareenka waa in la muujiyaa mar walba. Waalidiintu waa inay sheegaan sida ay dareemayaan si loo maareeyo shucuureed sida ugu wanaagsan ee suurtogalka ah.
Sidaa si la mid ah, waalidiintu waa inay masuul ka noqdaan caawinta ubadkooda si ay u ogaadaan waxa ay dareemayaan. Dareenku waa inuu dibadda u baxaa kana fogow dhibaatooyinka niyadeed ee suurtogalka ah sida walaaca.
Ogaanshaha sida loo dhegeysto waa mid kale oo ka mid ah dhinacyada ugu muhiimsan ee barbaarinta wanaagsan ee ubadka dareenka sare leh. Dhageysigani waa fure si ay u dareemaan in la fahmay lana jecel yahay mar walba.
Gaaban, Lahaanshaha ilmo xasaasi ah maaha dhammaadka adduunka waalid kasta. Waa ilmo ka naxariis badan kuwa kale oo awood u leh inuu dareemo dhammaan shucuurtiisa si aad ah. Marka la eego tan, waalidiintu waa inay raacaan tilmaamo taxane ah oo u oggolaanaya ubadku inuu ogaado sida loo maareeyo oo loo mariyo dhammaan shucuurtooda sida ugu macquulsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Hooyooyinka » Carruurta wax baro » Maxay noqon lahayd korinta ilmo dareen-xumo leh
Dhaqaalaha wareegtada ah iyo muhiimadda ay u leedahay deegaanka
Alaabta isku laabma si ay u qurxiyaan balakoonno aad u yar yar